(Waxaa laga soo toosiyay Beeraha)
Beer, Beero (wadar) (ingiriis: agriculture; carabi: زراعة) waa nidaamka abuurida, korinta, xanaaneynta iyo soo saarida dhir laga sameeyo cunto, dhar, daawo, hooy iyo guud ahaan manafaac taageera nolosha dadka, xoolaha, xayawaanka iyo inta ku tiirsan. Beeruhu waa aasaaska nolosha iyo jiritaanka nolosha, iyo barta ay ka soo uunkantey horumarka xadaarada aadamaha.
Waxa jira noocyo badan oo beero ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxak ale oo ay kakooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee.
10 Xalka dhibaatooyinka beeraha
Xalka dhibaatooyinka beeraha
Dhibaatada beertu waa mid ka mid ah caddaymaha badan ee ah in aadanuhu awoodin in uu dhulka iyo khayraadkiisa si guul leh u maareeyo. Nebi Yeremyaah wuxuu yiri: “Rabbiyow Yehowah, waan ogahay in binu-aadmiga jidkiisu uusan gacantiisa ku jirin, ninkii socda innaba karti uma leh inuu tallaabooyinkiisa toosiyo.” Sida iska cad, ninku wuxuu u baahan yahay gargaar rabbaani ah. Waxaadna ku kalsoonaan kartaa in caawimaaddaas ay soo socoto. Dhowaan dunida jannay noqon doontaa. Cunto badan oo nafaqo leh: “Dhulku wuxuu soo saaray midhihiisii, waxaa ina barakayn doona Ilaah, oo ah Ilaaheenna qudhiisa.”
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Beer&oldid=219447"
Last edited on 13 Oktoobar 2021, at 11:44
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 13 Oktoobar 2021, marka ee eheed 11:44.